သူတို့အန်းဒရွိုက်အပေါ်သို့မဟုတ်အိုင်ကွန်အပေါ်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်သောကြောင့်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သွားနှင့်သင်မကစားနိုငျသောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းများကိုရှာဖွေထက်ပိုဆိုးဘာမျှရှိပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ဒါကဒီနေ့အဆုံးသတ်တယ်၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့အခမဲ့ကောင်းသောညစ်ညမ်းဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူလာသောကြောင့်၊ဂိမ်းတိုင်းသည်မျိုးဆက်သစ်မှဖြစ်ပြီးသင်မည်သည့်ကိရိယာတွင်မဆိုကစားနိုင်သည်။ ဒီဂိမ်းပြီးသားလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းသဟဇာတဖြစ်ကြောင်းမသာ,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလုပ်ရှေ့တော်၌ထိုမျိုးစုံကိရိယာများပေါ်တွင်သူတို့ကိုအမှန်တကယ်ကစားပါတယ်။ ပြီးတော့ငါတို့ဆိုက်ကိုလာတဲ့သူကိုနှစ်သက်ဖို့သေချာတဲ့စုဆောင်းမှုတစ်ခုဖန်တီးခဲ့တယ်။, ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းအပေါငျးတို့သအမျိုးအစားကနေဂိမ်းထည့်သွင်းပါတယ်,ငါတို့သည်လည်းကွီးမွတျစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူလူတိုင်းအတွက်အရေးယူဆောင်ကြဉ်းရန်သေချာပါစေ။ အားလုံးသင့်ရဲ့ခြီးမွှောကျေနပ်ပါလိမ့်မည်နှင့်မျှမကိစ္စသင်လိင်ရှိသည်ဖို့ကြိုက်နှစ်သက်ဘယ်လောက်အမာခံ,ဒီခတျေကမ္ဘာကသင်သည်သင်၏လိင်မှုအားလုံးကိုရှုထောင့်နှင့်အတူစမ်းသပ်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဂိမ်းများကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်အပေါ်ဆိုက်ကိုလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားဘို့စုံလင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အညွှန်းများအတွက်လိုအပ်သမျှကိရိယာများရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်ပင်သင်သည်အခြားကစားသမားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုပိုပြီးစွဲငြိဖွယ်ရာစေရန်အချို့သောအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလာကြ၏။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏နာမကိုသင်ပြောပြအဖြစ်,သင်ဂိမ်းကစားမတိုင်မီပေးဆောင်ခံရဖို့ဘာမျှမရှိ. သင်သည်တစုံတခုကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မလိုပါနှငျ့သငျပင်ဂိမ်းများကိုကစားရန်မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။, ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းထက်ပိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုလိုအပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ယုတ်ကစားသမားများအတွက်ဤမြေတပြင်လုံးကြောက်မက်ဘွယ်ပလက်ဖောင်းဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ပျော်မွေ့!
အခြားအညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုဒ်များနှင့်အတူပြဿနာကိုသူတို့လိုချင်စေခြင်းငှါလူအပေါင်းတို့သည်လူမြိုးမြားကိုတပ်ဆင်ရန်သေချာစေပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤစုဆောင်းမှုကိုဖန်တီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သူမည်သူမဆိုကွဲပြားခြားနားသည်ဟူသောအချက်ကိုစိတ်ထဲ၌ရှိသည်။ တခ်ိဳ႕ကဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြလိုျဖစ္ႏိုင္တယ္၊တခ်ိဳ႕ကေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္။ တချို့ကယောက်ျားနှင့်အခြားသူများကဲ့သို့စေခြင်းငှါ,အမွေးသတ္တဝါများသို့မဟုတ်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌မတည်ရှိပါဘူးသောအခြားဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံချင်ပေလိမ့်မည်။
ကောင်းပြီ၊ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတိုင်းကိုအသနားခံသောဆိုဒ်ကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးဂိမ်းအမျိုးအစားအချို့ကိုလည်းယူဆောင်လာသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ပျော်မွေ့နိုငျသောဂိမ်း၏ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်အတူလာ။ တချို့ကဂိမ်းသင်တို့သည်နောက်ပုံပြင်သို့မဟုတ်ဘေးထွက်ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူလိင်ရှိသည်စေမည်။ ဒီလိင်တန်ကြီးတွေကရှေ့ကိုဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းရောက်နေပြီးကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စေမယ့်ဇာတ်ကောင်တွေကိုဖန်တီးနိုင်အောင်လည်းဇာတ်ကောင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလာကြပါတယ်။
အကယ်၍သင်သည်ဂိမ်း၏အဆုံးသို့ရောက်သည်အထိကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်မည့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဂိမ်းကစားခြင်းကိုလိုချင်ပါကအခမဲ့ကောင်းသောညစ်ညမ်းဂိမ်းတွင်လိင်ဂိမ်းအားလုံးရှိသည်။ ဤအကျောဇောတချို့ကတကယ်ဂိမ်းကစားသူအဖြစ်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုစိန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဤဂိမ်းများတွင်သင်၏ကြက်တိုက်ခြင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပြီးစွန့်စားခြင်း၊ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ရန်သူများကိုချေမှုန်းခြင်းနှင့်အဆင့်တက်ခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
အခြားဂိမ်းအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်ပျော်ရွှင်စေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍သင်သည်အဲလစ်ဇဘက်ကိုကြိုက်ပါကသင်လုပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ဂိမ်းပျက်ပြယ်ပုံကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်ကိုစာသားအခြေပြုဂိမ်းကစားခြင်းကိုပျော်မွေ့မည့်ဂိမ်းများရှိသည်။ သို့မဟုတ်သင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်,ထို့နောက်သင်ပြဿနာများဖြေရှင်းသင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်သဘောသည်ဆုခခြဲ့ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဟေဠိလိင်ဂိမ်းကိုသွားသင့်ပါတယ်။ အများကြီးပိုရှိပါတယ်နှင့်အရာခပ်သိမ်းတူးဖော်ရေးအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်တပ်ဆင်ထားသောဂိမ်းအချို့သည်အခြားဆိုဒ်များတွင်ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်မပါဘဲမရရှိနိုင်ပါဖူး။ ကျနော်တို့အခမဲ့လိင်ပြွန်အသုံးပြုသောတဦးတည်းဆင်တူကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမော်ဒယ်နှင့်အတူလာကြ၏။ ကျနော်တို့အသွားအလာဝန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုသိမှတ်လျက်,ငါတို့သည်အချို့သောကြော်ငြာတွေထဲကအပြေးဆိုက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောငွေရှာ,အခမဲ့အပေါငျးတို့သအကြောင်းအရာကိုဆက်ကပ်။ ဆိုက်တစ်ခုတွင်ကြော်ငြာများစွာသည်လူများကိုမောင်းထုတ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိသည်၊ထို့ကြောင့်သင်၏ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုသင်မကျော်နိုင်သည့်ပေါ့ပ်များသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများဖြင့်ပြတ်တောက်မည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေသည်။ လူတိုင်းသင်သည်ဧကန်အမှန်အခက်ခဲသွားဖုံးဖို့အကြောင်းပြချက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအခမဲ့ကောင်းသောညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်ကြိုဆိုကြသည်။